Cathy_Doll_Fiber_White_X_Gel_50g ::: 365myanmar.com
Computers And Tablet (PC)
မိုဘိုင်းဖုန်းများ နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
မိတ်ကပ် နှင့် အလှကုန်ပစ္စည်းများ
ဆံကေသာ အလှအပ နှင့် ကျန်းမာရေး
ဗွီတာမင် နှင့် အားဖြည့်ဆေးများ
Figure & Games
ကား နှင့် စက်မှုပစ္စည်းများ
ကျောင်းသုံး၊ ရုံးသုံး၊ အိမ်သုံး
အိမ်, ခြံ နှင့် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်
365 myanmar Pantry
ကုန်စုံ နှင့် ဝိုင်
ပင်မစာမျက်နှာ Moisturizer Cathy Doll Fiber White X Gel 50g
by Cathy Doll
☑️ Collagen ပရိတင်းဓာတ် ပိုမိုများပြားလာခြင်း
☑️ အသားရောင် ထိန်းညှိပေးခြင်း
☑️ ပျက်စီးသွားသော အသားရေအားပြုပြင်ပေးခြင်း
☑️ Collagen ပရိတငျးဓာတျ ပိုမိုမြားပွားလာခွငျး
☑️ အသားရောငျ ထိနျးညှိပေးခွငျး
☑️ ပကျြစီးသှားသော အသားရအေားပွုပွငျပေးခွငျး
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန် : 200 g
by W&P Design
အသားအရေကို ချောမွေ့စေပြီး (၂၄)နာရီအပြည့် ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ခြင်း
ချွေးပေါက်များကို လျှော့နည်းစေပြီး အဆီပိုများကို စုပ်ယူပေးနိုင်ခြင်း
Cathy Doll Snail Firming Cream Snail Gold for Wr
Gold Splash Essence 50g
Gold Splash Essence 5g
မျက်နှာပြင် နဲ့ မေးရိုးတို့ မှာ အသားရေတွဲခြင်းဟာ သင့်ရဲ့အသက်အရွယ်ကို ဖော်ပြနေတဲ့ အချက်တွေထဲက တချက်ပါပဲ။ ဒီ Fiber X Gel လေးကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် တွဲကျနေမယ့်သင့်အသားရေနဲ့အိုမင်းရင့်ရော်မှု့ များကို ချိန်တခုထိ နှုတ်ဆက် လက်ပြလို့ ရပါပြီ။ ပင့်ကူအိမ် အမျှင် ရဲ့ စေးကပ်ပြီး ကျုံနိုင်ဆန့် နိုင်သကဲ့သို့ သင့် အသားရေ အရောင်နဲ့ အသားရေ တင်းရင်းမှု့ ရှိအောင် Collagen ခေါ် ပရိုတင်းဓာတ်ကို သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှ များများထုတ်အောင် ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ခရင်လေးကပဲ လေထုညစ်ညမ်းမှု့ ကြောင့် ပဲဖြစ်ဖြစ် နေလောင်ဒဏ် အအေးဒဏ်တို့မှ သင့်အသားရေကို မပျက်စီးအောင် ကာကွယ်ပေးအုန်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သင့်ကို အိုမင်းရင့်ရော်စေမယ့်အရေးအကြောင်းတွေကို သင်တွေ့ ရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Fiber White X Gel လေးကို သင့်မျက်နှာ နှင့် လည်ပင်းတို့ ကို ဖြေးညှင်းစွာ သုတ်လိမ်းပေးပါ။ U Zone နေရာဖြစ်တဲ့ ပါးနှစ်ဖက်နှင့် မေးစေ့ နေရာများကို ပင့်ကူမျှင် ဖြန့် ကျက်သည့်အလား သေချာစွာ သုတ်လိမ်းပေးပါ။ နေ့ စဉ် ပုံမှန် သုံးပြုခြင်းဖြင့် တင်းရင်းပြီး ငယ်ရွယ်လှပတဲ့ အသားရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မကျြနှာပွငျ နဲ့ မေးရိုးတို့ မှာ အသားရတှေဲခွငျးဟာ သငျ့ရဲ့အသကျအရှယျကို ဖျောပွနတေဲ့ အခကျြတှထေဲက တခကျြပါပဲ။ ဒီ Fiber X Gel လေးကို အသုံးပွုခွငျးအားဖွငျ့ တှဲကနြမေယျ့သငျ့အသားရနေဲ့အိုမငျးရငျ့ရျောမှု့ မြားကို ခြိနျတခုထိ နှုတျဆကျ လကျပွလို့ ရပါပွီ။ ပငျ့ကူအိမျ အမြှငျ ရဲ့ စေးကပျပွီး ကြုံနိုငျဆနျ့ နိုငျသကဲ့သို့ သငျ့ အသားရေ အရောငျနဲ့ အသားရေ တငျးရငျးမှု့ ရှိအောငျ Collagen ချေါ ပရိုတငျးဓာတျကို သငျ့ခန်ဓာကိုယျမှ မြားမြားထုတျအောငျ ကူညီပေးမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီ ခရငျလေးကပဲ လထေုညဈညမျးမှု့ ကွောငျ့ ပဲဖွဈဖွဈ နလေောငျဒဏျ အအေးဒဏျတို့မှ သငျ့အသားရကေို မပကျြစီးအောငျ ကာကှယျပေးအုနျးမှာပဲဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ သငျ့ကို အိုမငျးရငျ့ရျောစမေယျ့အရေးအကွောငျးတှကေို သငျတှေ့ ရတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။
Fiber White X Gel လေးကို သငျ့မကျြနှာ နှငျ့ လညျပငျးတို့ ကို ဖွေးညှငျးစှာ သုတျလိမျးပေးပါ။ U Zone နရောဖွဈတဲ့ ပါးနှဈဖကျနှငျ့ မေးစေ့ နရောမြားကို ပငျ့ကူမြှငျ ဖွနျ့ ကကျြသညျ့အလား သခြောစှာ သုတျလိမျးပေးပါ။ နေ့ စဉျ ပုံမှနျ သုံးပွုခွငျးဖွငျ့ တငျးရငျးပွီး ငယျရှယျလှပတဲ့ အသားရကေို ပိုငျဆိုငျနိုငျမှာပဲဖွဈပါတယျ။
သင့်သုံးသပ်ချက်ရေးရန်အတွက် 365myanmar.com တွင် register လုပ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
'); // dialogInstance2.setType(BootstrapDialog.TYPE_DANGER); // dialogInstance2.open(); } }, dataType : "json" }); });
Find us on Facebook Find us on Viber
Copyright © 2022 365myanmar.com. All rights Reserved.
'); // dialogInstance2.setType(BootstrapDialog.TYPE_DANGER); // dialogInstance2.open(); var myModal = new jBox('Modal'); //myModal.setTitle(""); myModal.setContent(result.msg); myModal.open(); } }, dataType : "json" }); } e.preventDefault(); });